Maxkamad ku taal Boosaaso oo xukun ku riddey nin carruur tahriibinayey - Sabahionline.com
Maxkamad ku taal Boosaaso oo xukun ku riddey nin carruur tahriibinayey Abriil 16, 2012
Nin ayaa lagu xukumay 12 sano oo xarig ah ka dib markii lagu helay dembiga ah in uu carruur si sharci darro ah u waday, Idaacadda Bar-Kulan ee ay QM maalgeliso ayaa Axaddii (15-ka April) werisay. Qodobbo la xiriira
28 meyd oo laga helay xeebta Somalia
Japan oo doomo ilaalo ah siisay ciidanka ilaalinta xeebaha Jabuuti
Madaxa bilayska socdaalka Talyaaniga oo booqasho ku maraya koofurta Jabuuti
Ibraahim Cumar Liibaan ayaa isagoo Boosaaso jooga lagu riday xukun ku saabsan in uu dhoofinayey sagaal carruur ah oo ay da’doodu u dhexayso toddoba iyo 14, oo ay siddeed ka mid ihi gabdho yihiin si ay Yemen uga shaqeeyaan. Garsoore Sheekh Aadan Aw Axmed oo maxkamadda guddoominayey ayaa gacan ku haynta carruurta u igmaday Tadamun oo ah urur maxalli ah inta waaliddiintood laga helayo. Saraakiisha Puntland ayaa sheegaysa in ka dib markii olole wacyiggelin ah la sameeyey ay haatan dadku ka digtoon yihiin afduubka iyo tahriibinta, Garowe Online ayaa werisay. Muxuu kula yahay qoraalkan?
April 16, 2012 @ 10:23:29PM
Haddii ninkaas si sax ah loogu soo cadeeyey dambiga la yiri xukun baa lagu rIday wuu ila qaldan yahay xukunkaasu.Ninkaas labo midkood baan ku xukumi lahaa.Marka hore waxaan ku xukumi lahaa waxa ay ka qabto Diinta Islaamku.Marka labaad waxan ku xukumi lahaa XABSI DAA`IM.Waxaan kaloo maxkamad la raadin lahaa Waalidiintii dhashay caruurtaas ninkaas gacanta u soo galiyey.Tan kale waxaan sleeyahay ninku n uu hadda ka hor caruuraha dhoofin jirey.